Talooyinka Nolosha | Somaliska
Wararka Talooyinka Nolosha
Qeybtii koowaad Maryan waa gabar ku dhalatay dalkaan Iswiidhan iyo magaaladatan ee Göteborg. Sida ay u tahay qof degan oo debci wanaagsan heeysatana dhaqanka, diinta iyo anshaxa wanagasan ee soomaalida waxaad isweydiineysa su,aalo ah...
Hor fadhiga badan ee internet-ka oo wax yeello u geeysta maskaxdda carruurta
Culimadda ku xeel dheer cilmiga bulshadda iyo caafimaadka carruurta ayaa had iyo goor ka diga halista uu leeyahay isticmaalka badan ee carruurtu isitcmaasho aaladda internet-ka. Daraasad cusub oo dhawaan ay sameeysay hey’ad laga leeyahay...
Stockholm/wakaaladaha (Somaliska) Wasaaradda arrimmaha dibadda Iswiidhan ayaa muwaadiinteeda uga digtay dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ineey u safraan. Qoraal laga soo saaray wasaradda ayaa lugu sheegay in muwaadiinta ay ka digtoonaadaan u safrida...
Baaritaan lagu sameeyay taageerada dhaqaalaha ee ay wadamada taajirka ah ay siiyaan kuwa faqiirka ah ayaa lagu soo bandhigay 10-ka wadan ee aduunka ugu gacanta furan. Wadamadaan ayaa lagu qiimeeyay in ay yihiin kuwo taageero...
10-ka magaalo ee ugu nolosha fiican Yurub
Haddii aad qorsheynayso in aad u guurto wadan kale oo Yurub ah, 10-kaan magaalo ayaa lagu sheegaa in ay yihiin kuwa ugu nolosha fiican qaarada Yurub. Baaritaankaan ayaa la sameeyay ka hor intii aysan UK...
Waxaa jira labo nuuc oo lamaanayaasha ka mid ah, kuwo ku wada nool xaalada oo ku qasabtay sida in ay caruur wada leeyihiin oo aan dooneyn in ay kala tagaan balse aan sidaa ugu...
Kombutarkaaga in aad viruska ka ilaaliso dantaada ayaa ku jirta ayadoo waqtigaan hada la joogo ay virusyada qaarkood naftaada qatar galin karaan ayagoo loo isticmaali karo in la xado warbixintaada ama akoonka bankigaaga. Balse...
Iyadoo aan ku jirno Ramadaanka oo Sweden ay ku soo aaday bisha Juun taasoo ay aad u dheeryihiin saacadaha soonka, ayaa haddana waxaa jira dhowr wadan oo kale oo ka sii liita Sweden. Waa...
Dadka leh dabeecadaha hoos ku xusan ma noqdaan kuwo guul ka gaara shaqada iyo ganacsiga, maadaama ay yihiin dabeecado qofka ka horstaaga in uu nolosha horumar ka sameeyo. Hadaba qiimeyn isku samee oo haddii...
Yaa Muslimiin, Ramadaan waxaa ka dhiman dhowr maalmood oo keliya. Waa maxay qorshahaaga ku aadan ka faa’ideysigiisa? Haddii aad qorshe dajisay waxaan ku leeyahay hambalyo. Haddii aadan qorshe degsan waxaan halkaan kuugu soo bandhigayaa...
Isticmaalka badan ee moobeelka ayaa dhaqaatiirta Sweden ay sheegeen in uu dadka u keenay aragooda oo xumaaday. Dad badan oo maalinkasta isticmaala moobeelka iyo computerada saacado badan ayaa waxay ka cabanayaan in uu xumaaday aragooda...